Trinidad sy Tobago dia manohy mitolona ho afaka COVID-19 afaka
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Trinidad sy Tobago dia manohy mitolona ho afaka COVID-19 afaka
Aprily 23, 2020
Trinidad sy Tobago dia mbola masiaka amin'ny ady atao amin'ny COVID-19. Ny tranga tsara voalohany dia voamarina tamin'ny 12 martsa 2020 ary 115 izao ny tranga voamarina avy amin'ny santionany 1,424 izay nosedraina ny Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Nisy valo ny maty, raha olona 37 kosa no navotsotra tao amin'ny hopitaly Covid-19. Hopitaly sy tobim-pahasalamana hafa no ampiasaina mba hanomezana fanampiana ara-pitsaboana ireo ahiahiana na voan'ny virus.
Ny governemanta dia nametraka ny fijanonana an-trano mba amin'ny sasakalina ny 28 martsa 2020 saingy nitarina hatramin'ny 30 aprily ary hojerena amin'ny fotoana mety. Ny mpiasa tena ilaina ihany no mahazo mandeha any amin'ny toeram-piasana misy azy ireo, raha ny mpiasa tsy tena ilaina kosa dia entanina hanatanteraka ny asany avy any an-tranony avy.
Betsaka ny fanovana ny ora fiasan'ny orinasa amin'ny fivarotana maro, banky sy toerana hafa misokatra mandritra ny ora voafetra ary amin'ny andro mihena ary mihidy ny sekoly. Nihantona ny fotoanan'ny fitsangantsanganana an-dranomasina ary nikatona ny sisin-taninay rehetra taty aoriana.
Nentanina ny protokol navoakan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, toy ny fanaovana saron-tava, ny halavirana ara-tsosialy ary ny fepetra hafa ary olom-pirenena maro no mihaino ireo fotokevitra ireo.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia nanao valan-dresaka vaovao virtoaly isan'andro hanavao ny isan'ny mponina mikasika ny fivoarana farany momba ny areti-mandringana na amin'ny sehatra manerantany na nasionaly.
Ny praiminisitra Dr. Keith Rowley dia manangana komity ho an'ny fanarenana COVID-19
Komitin'ny asa aman-draharaha sy mpikambana matihanina 22 mpikambana no nantsoin'ny praiministra Trinidad sy Tobago, Dr Keith Rowley, hanampy ny firenena hamolavola drafi-pandaminana ho fanarenana ny vokatry ny COVID-19.
Ny sekreteran'ny komity dia ny minisitry ny fitantanan-draharaham-panjakana, Allyson West ary misy minisitra roa ara-bola teo aloha koa, Wendell Motley sy Winston Dookeran.
Nilaza i Dr. Rowley fa tsy ho mora ny asan'ny Komity satria ny tolo-kevitr'izy ireo dia ho zava-dehibe amin'ny fandinihana ny làlana mankany amin'ny fahombiazan'ny toekarena ao amin'ny firenena.
Hoy izy: “miatrika krizy maha-olona tsy mbola nisy toy izany ny tany izay niteraka fikorontanana ara-toekarena sy ara-tsosialy goavambe.”
Hoy ny praiminisitra: "Izao tontolo efa nahazatra antsika izao ary ny fiainana fantatsika dia niova ary mety tsy hiverina intsony."
Nilaza izy fa ho zava-dehibe ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandaminana ny làlana ho amin'ny fahombiazan'ny toekarena eto amin'ny firenena. Nilaza koa i Dr. Rowley: "Ny dingana voalohany lehibe iray amin'ny fampiroboroboana ny Map Road Recovery dia mila mamantatra mazava sy mamakafaka ireo teritery izay mbola hisy mandritra ny fotoana fohy."
Nanampy izy fa ny Sarintany dia "tsy maintsy mamaritra ny tanjona sy ny tanjona tratrarina ary ny fepetra horaisina mandritra ny fotoana fohy ary mandritra ny fotoana maharitra sy maharitra."
Ny praiminisitra mendri-kaja dia nilaza tamin'ny fivoriana voalohany nataon'ny Komity fa ny tanjony eo noho eo dia hiompana amin'ny fandraisana andraikitra kendrena hitazomana ny firenena, hitady fandresena haingana ho an'ny hetsika ara-toekarena manomboka amin'ny sehatra lehibe ary hiteraka fihanaky ny tsy fitoviana ara-toekarena amin'ny fitehirizana ny asa sy ny fiarovana ny asa. fidiram-bola sy fanampiana ara-tsosialy an'ireo vondrona marefo.
Hoy izy: "Ny fanakorontanana mianjady aminay dia mitondra ihany koa ny fotoana hamoronana toekarena sy fiarahamonina vaovao azo antoka kokoa izay mety hanana vintana tsara kokoa hahatratrarana ny fitomboana sy ny fampandrosoana maharitra."
Nilaza ny praiminisitra fa tokony ho vonona amin'ny faran'ny volana aprily ny volavolan-drafitra marolafy, ary nilaza izy fa tsy antenaina hivoaka ny faritra mampidi-doza ny firenena amin'ny volana jona amin'ity taona ity.
Vondrona Lufthansa: valiny Q1 mialoha ary ny fomba fijery ny fivelarana ara-bola
ST. KITTS & NEVIS: Olona iray tafarina
Tsy misy famerana intsony any Florida sy COVID-19 nanambara ny tantaran'ny governora DeSantis